Mujaahidiinta Dhaalibaan Oo La Wareegay Dhul Baaxadweyn. – Calamada.com
Mujaahidiinta Dhaalibaan Oo La Wareegay Dhul Baaxadweyn.
calamada March 5, 2017 4 min read
Degmadan ayaa dhowr bilood ku hoosjirtay goâ€™doon aad u adag oo ay saareen mujaahidiinta.
“Mujaahidiintu waxay magaalada ku qaadeen dagaal xoogan oo dhacay xilli aroornimo ah kaas oo ugu dambeyntii ay kaga guuleysteen cadowga. Maleeshiyaat badan ayaa lagu dilay dagaalka kuwaas oo qaar ka mid ah meydadkooda ilaa hadda uu yaallo magaalada, Waxaana dagaalka ku qabanay ugu yaraan 13 ka mid ah murtadiintaâ€ ayuu yiri sarkaal.
Saraakiil u hadashay xukuumada dabadhilifka ah ee Kaabuul ayaa dhankooda xaqiijiyey in degmada Tala Wa Barfak ay ka baxday gacantooda kadib dagaal xooggan oo halkaas ku dhexmaray ciidankooda iyo Dagaalyahan Taliban, waxayna sheegeen in askartooda ay ku jireen goâ€™doon adag muddo bilooyinka ka hor inta aanan lasoo weerarin magaalada.
Faaâ€™iz Maxamed oo ah gudoomiyaha degmadan ugu magacaaban xukuumada dabadhilifka ah ee Afghanistan ayaa warbaahinta maxaliga ah ee dalka u sheegay in Imaarada Islaamiga ay la wareegtay degmada degmada, kadib markii boqolaal dagaalyahano ah ay dhowrjiha ka soo weerareen magaalada.
Gaalkan ayaa hadalkan ka sheegay shirjaraaâ€™id oo uu kaga hadlayey duqeyn ay ku beegsadeen Sheykh Mullah Cabdi Salaam oo ahaa waaligii Imaarada Islaamiga ugu magacownaa gobolka Khunduz., Waxa uu sheegay in hogaamiyahan la dilay uu ahaa hogaamiye mayal adag oo halis ku ahaa qorshaha wada hadalada ee la doonayo in xukuumada Kabul ay la furto Imaarada islaamiga Islamarkaana haddii isaga la taqalusay ay haboon tahay in markale Taliban loogu yeero miiska wada hadalka.
“Dilka Mullah Cabdi salaam waa fursad lagu keeni karo isbedal. Dadka Afghanistan waxay doonayaan Nabad, Xukuumada Kabul-na waxay balan qaaday sidii ay ugu guuleysan lahayd qorshaha nabadda iyadoo loo marayo wadada dib u heshiisiinta marka Taliban waa in ay ogaataa in wadada kaliya ee horay loogu socon karo ay tahay mida dib u heshiisiintaâ€ ayuu yiri gaal John Nicholson.
“Dadka Muslimiinta ah ee reer Afghanistan waxay idiinka aaminsan yihiin gumeyste la mid ah isla gumeystihii Ingiriiska iyo Soviet-ka ee lagula dagaalamay dhulkan, weyna idiinka saari doonaan dhulkooda sida ay uga saareen gumeystihii hore oo kaleâ€ ayaa lagu yiri War Saxaafadeed ka soo baxay Imaarada oo uu ku saxiixnaa Sheykh Dabiixullaah Al-Mujaahid.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri: “Istish-haadka Mullah Cabdi Salaam uma aragno qoomamo ama guuldaro ee waxaan u aragnaa sharaf iyo guul sii xoojineysa sida reer Khunduz iyo reer Afghan ugu ooman yihiin aargudasho. Waxay sidoo kale istish-haadkiisa daboolka ka qaatay kalsoonida lagu qabo mujaahidiinta iyo in uu kordhay jaceylka ay muslimiintu u qabaan Mullah Cabdi Salaam iyo walaaladiisa Waxaadna ogaataan in aan nahay qowm jecel istish-haadka iyo dilka wadada Alle si la mid ah sida aad u jeceshihiin nolosha iyo dunida liidata oo kale.
War Saxaafadeedkan ka soo baxay Sheykh Dabiixullaah Al-Mujaahid waxaa sidoo kale lagu yiri: “Haddii aadan soo gabagabeynin duulaankiina, sidoo kalena aadan aqbalin dalabaad muslimiinta waxaan idiin sheegeynaa in si qasab ah aad kaga bixi doontaan dhulkan Allaah idinkiiâ€ Waxaa bayaanka uu intaas sii raaciyey in mujaahidiintu ay sii wadi doonaan dagaalka ka dhan ah xukuumada Kabul iyo ciidamada saliibiyiinta ah ee jooga wadankaas.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 06-06-1438 Hijri.
Next: Akhriso Hogaanka Guud Ee Mujaahidiinta Al-qaacidah Oo Ka Tacziyeeyay Istish-haadka Abil-kheyr Al-misri.